လမ်းပြကြယ်: ပြည်တွင်း Reporter များအတွက်
ပြည်တွင်း Reporter များအတွက်
ပြည်တွင်း Reporter များအတွက် လွတ်လွတ်လပ်လပ် Camera နဲ့ရိုက်လို့မရဘူးဆိုတော့ Spy watch လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် ဒီ spy watch လေးက VIDEO, PHOTO, AUDIOလဲရပါတယ်။ ပြီးတော့ဈေးကလဲ သက်သာတာမို့ သတင်းထောက်များအတွက် Camera ကြီးတကားကားနဲ့ လိုက်ရိုက်ပြီး အဖမ်းခံစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး. အေးအေးဆေးဆေးလေး နာရီလေးနဲ့ မသိမသာလေး ရိုက်
ပြီးရင်အေးအေးဆေး computer နဲ့ Edit လုပ်ပြီးတော့ youtube မှာတင်လိုက်ရုံဘဲ။ ဒီမှာသူရဲ့ပြောချက်အရတော့
အသက် ၁၂ နှစ် plus အတွက်နှင့်သာ သင့်လျှော်ပါတယ်တဲ့...ဒါပေမဲ့ အသုံးပြုတက်ရင် ပြုတက်သလိုအသုံးဝင်ပါတယ်။ မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်မှာပါ.
သူရဲ့ FEATURE တွေကတော့
* The Spy Video Watch is just the same as any old watch really… except it's got an amazing hidden camera.
အေးဗျာ ဝယ်ချင်တယ် လမ်းညွှန်စမ်းပါဗျ
nayphonehlan@gmail.com ဒီမေး ကိုပို့ပေးနှိုင်မလား